अ’ल्सर भए पछि कस्तो देखा लक्षण पर्छ..? – Khabar PatrikaNp
अ’ल्सर भए पछि कस्तो देखा लक्षण पर्छ..?
Prevसुनले बनेको संसारकै महँगो बिमान !
Nextकोरोना संक्रमित गर्भवतीको सफल शल्यक्रिया, पछी छोरा जन्माइन
दिनहुँ ढाड दुखेपछि अस्पताल पुगे, स्क्यान गर्दा यस्तो भेटियो की डाक्टर समेत चकित परे ..!
राजसंस्था तथा हिन्दुराष्ट्र देशमा आजको आवश्यक्ता : राजेन्द्र लिङ्देन
लोडसेडिङको अन्त्य प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना र ।सङ्कल्पको कारण : मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली